देशै लज्जित बनाउने प्रियंकाको रेड कार्पेट ठट्टा - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > मनाेरंजन > देशै लज्जित बनाउने प्रियंकाको रेड कार्पेट ठट्टा
May 29, 2019 May 29, 2019 GRISHI465
यो हप्ता नेपालका मिडिया कान्सका समाचारले तरंगित बने। यसमा दुइटा समाचार थिए, एउटा अभिनेत्री प्रियंका कार्की कान्सको रेड कार्पेटमा हिँड्ने। र, अर्को कान्सकै एउटा इभेन्टमा निर्देशक मीन भामले ६६ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको नर्वेजियन ग्रान्ट सरफन्ड जितेको खबर।
प्रियंका कार्की कान्स जाने खबर अचानक डढेलोझैँ फैलियो। सुरुमा केही अनलाइनमा फाट्टफुट्ट आएको समाचार मे १८ देखि जोडतोडले आउन थाल्यो। समाचारलाई पुष्टि गर्ने ‘कोट’बिनाका यस्ता समाचार नेपालका ९० प्रतिशत मनोरञ्जन अनलाइनमा छिनछिनमा आउँछन्। त्यसैले धेरैले पहिला प्रियंकाको यो समाचारलाई यस्तै ठाने, तथ्यहीन ! तर, पछि इन्स्टाग्राममा प्रियंकालाई शुभकामनासहित रविना देशराज श्रेष्ठको पोस्ट आयो।
प्रियंकाकी हुनेवाला सासुले नै शुभकामना दिएपछि खबरको सत्यतामा शंका रहेन। भोलिपल्ट प्रियंकालाई नै ‘कोट’ गरेका थुप्रै समाचार आए, जहाँ उनले आफू नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर जान लागेकी बताएकी थिइन्। ती समाचारमा प्रियंका स्वयंले मे २० मा आफू रेड कार्पेटमा हिँड्ने दाबी गरेकी थिइन्। प्रियंका व्यस्त रहने सामाजिक सञ्जालमा पनि उनको दाबी यस्तै थियो।
मे २० को साँझदेखि धेरै सञ्चारकर्मीका मोबाइल इन्स्टाग्रामको रिफ्रेस बटनमा थिए। सबै जना प्रियंकाको फोटो सबैभन्दा पहिला हालेर प्रियंकाको ‘कान्स रेड कार्पेट डेब्यू’ हेर्न लालायित थिए। तर, पाँच दिन कुर्दा पनि त्यो फोटो आएन। प्रियंकाका बग्रेल्ती फोटो आए तर दुनियाँले थाहा पाएको रेड कार्पेटभन्दा बिल्कुलै भिन्न।
रेड कार्पेट मतलब सेलिब्रिटी पछ्याइरहेका हजारौँ क्यामरा र तिनै क्यामराबाट बिजुलीझैँ चम्कने फ्ल्यास अनि तिनै फ्ल्यासका बीचमा हावामा हात हल्लाउँदै हिँड्ने सेलिब्रिटी। तर, प्रियंकाको रेड कार्पेट होटलको कोठा र लबीभन्दा बाहिर आएन। कुनै पनि यस्ता फोटो थिएनन्, जहाँबाट कान्सको माहोल देखियोस्।
यता नेपालका मिडिया भने रेड कार्पेटका नाममा प्रियंकाले यतैतिर खिचेका फोटो हालेर दंग परे। होटलको झ्यालमा खिचेका फोटो त कहिले लबीमा खिचेका फोटोलाई रेड कार्पेटको फोटो भनेर हाल्न केही मनोरञ्जन पोर्टलबीच प्रतिस्पर्धा नै थियो। प्रियंकाले कान्स जानुअघि आफूलाई कान्स फेस्टिभलले नै बोलाएको र देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर जान लागेको बताएकी थिइन्। कान्स जाने आफू पहिलो सेलिब्रिटी भएको पनि उनको दाबी थियो।
त्यसमा रेड कार्पेटमा हिँड्ने गफ पनि सामेल थियो। त्यसैले जब प्रियंका कान्स पुगिन्, उनलाई आफ्नै गफ भारी परेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो। हरेक फोटोमा कान्स लेखेर प्रियंका आफू कान्स गएको प्रमाणित गर्न आतुर थिइन्। हरेक फोटोमा कान्स लेखेको देखेपछि धेरैले उनको इन्स्टाग्रामको फोटोमा टिप्पणी गरे, ‘कत्ति कान्स लेखेको ? हामीलाई थाहा छ त तपाईं कान्स गएको हो भनेर ? हरेक चोटि भनिरहनुपर्छ ?’
तर, प्रियंका कार्कीले रेड कार्पेटमा हिँड्ने कुरालाई कति सजिलै लिइन्, उनका अन्तर्वार्ता हेर्दा थाहा हुन्छ। अझ त्यसमाथि राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर जान लागेको गफ त छँदै छ।
देश छाड्दै गर्दा प्रियंकाले एयरपोर्टमा केही युट्युब च्यानललाई गर्वसाथ आफू कान्समा गएर नेपाललाई चिनाउने दाबी पनि गरेकी थिइन्। सँगै, उनको अर्को दाबी पनि थियो, ‘म नेपालबाट कान्स जाने पहिलो मान्छे हो।’
प्रियंकाभन्दा पहिला त्यहाँ थुप्रै नेपालीले सहभागिता जनाइसकेका छन्। गत साल मात्र अञ्जली लामाले नेपालको पहिलो ट्रान्सजेन्डर मोडलका रूपमा फेसन सोमा सहभागिता जनाएकी थिइन्। यही साल पनि मीन भाम र फिडेल देवकोटा कान्समै थिए। मीनको स्क्रिप्ट ‘चिसो वर्ष’ले कान्समै चलिरहेको एउटा इभेन्टबाट ६० हजार डलर जितेको थियो भने फिडेलको फिल्म ‘काङलिङ’ सिने फाउन्डेसनको एटलियरमा उत्कृष्ट १५ भित्र पर्न सफल भएको छ।
उत्कृष्ट १५ भित्र अटाउने फिल्मले फिल्म निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माता पाउने सम्भावना हुन्छ। सहनिर्माता, वितरक आदि भेटिन्छन्। फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्मले सहभागिता जनाउँदा वा पुरस्कार जित्दा देशको प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रियंका जत्तिको हिरोइनले यति त बुझ्नुपर्ने हो, बलिउड हिरोइनका नक्कल गरिएका लुगा लगाएर र कान्सको कुना च्यापेर फोटो खिचेर देशको प्रतिनिधित्व हुुँदैन।
प्रियंका गइन्, यसमा कुनै आपत्ति होइन। जे–जे गरिन्, त्यसमा पनि भन्नुपर्ने कुरा केही थिएन। तर, कान्सको चार वटा साइड लाइन इभेन्टमा सहभागी हुने कुरालाई देशको गौरवसँग जोड्न कुनै जरुरी थिएन। सुझ न बुझ रेड कार्पेटमा हिँड्छु भन्न पनि जरुरी थिएन। कमसे कम प्रियंकासँगको अपेक्षा यत्ति हो।
कान्स सकिँदै गर्दा फेसबुकमा प्रियंकाको एउटा अन्तर्वार्ता आएको छ, कुनै फ्रान्सेली पत्रकारले लिएको। यो अन्तर्वार्ताले कान्समा उनको उपस्थितिमा थप प्रश्न उठ्छ। अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारलाई न प्रियंकाको बारेमा थाहा छ, न प्रश्न ठीकसँग सोधेको छ। अनि, अन्तर्वार्ता पनि यस्तो ठाउँमा छ जहाँबाट मानिस ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्। न प्रस्तोताले फलानो कार्यक्रमका लागि प्रश्न सोधेको भन्छ, न दायाँबायाँ केही देखिन्छ। त्यसमाथि पत्रकारको अंग्रेजी।
समग्रमा अन्तर्वार्ता पूरै ‘स्क्रिप्टेड’ देखिन्छ। आशा गरौँ, प्रियंकाले यो आशंका गलत साबित गरून्। नत्र भने, प्रियंकाले कान्सको गफ दिएर आफ्नो इज्जत घटाइसकेकी छिन्। यदि यो अन्तर्वार्ता पनि नक्कली पर्‍यो भने प्रियंकाको कान्स यात्रा गर्व होइन, लज्जामा परिणत हुन्छ। अनि, उनको रेड कार्पेट ठट्टाले देशै लज्जित हुने अवस्था आउनेछ।
अन्नपूर्ण सम्पूर्णका लागि सामीप्यराज तिमल्सेनाले तयार पारेको